Sawiro+Codad Kulan Dhexmaray Shabaabul Mujaahidiin Iyo Beesha Abgaal. – Bogga Calamada.com
January 10, 2018 8:14 am Views: 1002
Shir Ballaaran oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha Abgaal ayaa lagusoo gaba gabeeyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Sh/dhexe.
Kulanka oo ay soo agaasintay Xarakada Al Shabaab ayaa diiradda lagu saarayay kaalinta Beesha Abgaal Cusmaan ay ku leedahay halganka ka socda dalka Soomaaliya ee lagula jiro ciidamada shisheeye ee duullaanka gardarra ah soo qaaday.
Mas’uuliyiin Katirsan Mujaahidiinta oo gaba gabada kulanka warbaahinta lahadlay ayaa bogaadiyay go’aanka gobanimo oo ay beesha Abgaal qaadatay, Sheekh Xuseen Cali Fiidoow oo katirsan Mas’uuliyiinta Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegay in Beesha Abgaal ay kula ballameen sii xoojinta kaalinta ay uga jirto Jihaadka dalka ka socda.
Sheekh Xasan Yacquub oo ah waaliga Wilaayada Islaamiga Galguduud oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa beesha Abgaal ku bogaadiyay go’aanka geesinimada leh ee ay qaadatay, sidoo kale mas’uuliyiin ay kamid yihiin waaliga Wilaayada Islaamiga Hiiraan Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan iyo Sheekkh Cali Katiin oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ayaa kalimado qayim ah ka jeediyay goobta.
Sheekh Yuusuf Ciise Kaba Kutukade oo ah waaliga Wilaayada Islaamiga Sh/dhexe ayaa ka taariikheeyay Beesha Abgaal iyo kaalintii ay ku laheyd dagaalladii gumeystaha lagula galay dalka Soomaaliya illaa iyo dhulka Soomaaligalbeed ee Itoobiya gumeysato.
Imaamka Beesha Abgaal Imaam Maxamuud Xaaji Xaamud oo kamid ah waxgaradkii beesha ee kulanka ka qeyb galay ayaa kalimad qiima badan oo uu ka jeediyay madasha wuxuu ku sheegay in Abgaal ay Shabaabul Mujaahidiin lagaleen Ballan adag oo ah ka qeyb galay dagaalka Jihaadka ah isagoo ugu baaqay dhalinyarada beesha in ay sare uqaadaan tababarrada iyo barashada cilmiga sharciga ah.
Abwaan Cabdulle Geeda Naar oo kamid ahaa dadkii caanka ahaa ee shirka ka qeyb galay ayaa goobta ka jeediyay Gabay qiima badan oo ka hadlayay waaqica dalka Soomaaliya ka taagan wuxuuna ballan qaaday in Abgaal kasoo dhalaali doono ballantii uu ku galay difaaca diinta iyo dalka
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Waaliga Sh/dhexe.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Waaliga Hiiraan.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Sh Xuseen Fiidow.
Halkan Ka Dhageyso Odayaasha Beesha Abgaal.